Hantida Dibadda - Faa'iidooyinka, Ilaalinta Hantida, Xukunada & Dejinta
Ammaanka Deegaanka ee Ilaalinta Hantida
Khabiiro badan oo hanti-dhawr ah ayaa isku raacay kalsooni dibadeed ee ku haboonaanta habboon ee la doortay waa gaariga badbaadada ugu xoogan adduunka. The Cook Islands Trust ayaa muujisay in ay bixiso taariikhda kiisaska ilaalinta hantida ugu xoogan. Waa kan xukunka ugu wanaagsan ilaalinta hantida fikirka. Aynu nidhaahno maxkamadda maxalliga ah ayaa codsanaysa bixinta. Maskaxda ku hay, shirkadda aaminka ee Jasiiradda Cook Islands, oo ku taal meel ka baxsan xukunka maxkamadda deegaankaaga. Sidaa daraadeed, wakiilka (oo sida caadiga ah shirkadaheena sharciga dibada) kuma qasbana inay u hoggaansamaan amarka maxkamadda. Sidaas darteed, ruqsad haysta, xiran, caymis 30 + sano jir shirkad aamin ah hantidaada ka ilaaliso habka waxyeellada. Nabadgelyada macaamiisha ee aan macaamiisha nahay waxaan dhisi karnaa Shirkad mas'uul ka ah xayiraadda xadidan (LLC) taas oo ah 100% oo leh kalsoonida. The macmiilku waa maamulaha LLC.
The xisaabaadka waxaa lagu qabtaa LLC oo ku jira bangi caalami ah oo ammaan ah. Macaamiilku waa saxeexa dhammaan akoonnada bangiga. Markay “wixii xumaantu” dhacaan isla markaana hantida maxkamadaha ay qabsan karaan. Marka, wakiilku wuxuu isu soo taagi karaa inuu noqdo maamulaha LLC. Taasi waa, waxay qabanayaan wixii aad ku siisay shirkadda aaminka inay sameeyaan - dhawraan hantidaada. Mar haddii hanjabaad sharciyeed ay gudubto, macaamilka waxaa dib loogu soo celiyay inuu noqdo maamulaha LLC iyada oo hantiduna aysan wali shaqeyneyn. Daraasaddeena waxay muujisay in aaminka qaab dhismeedka Cook Islands uu si habsami leh u ilaaliyay hantida macaamiisha caqabado sharciyeed kasta.
Kalsoonida dibada iyo aaminka soo jireenka ah
An Amaanka dibada waa mid aad u badan sida aaminaad dhaqameed. Sida oo kale, waxay ka kooban tahay xiriir ama nidaam ka dhexeeya qaybaha soo socda: "Ammaano (yada)," "Dejiye (yaasha)," iyo "Ka-faa'iideystayaal".) Qodobbada waxaa lagu sameeyay qoraal dukumiinti sharci ah oo khasab ah. Waxaan ugu yeernaa "Awood Kalsoonid". Qalabkan sharciga ah wuxuu lahaan karaa cinwaanka hantida iyo hantida. Waxay maareyn kartaa hantida la sheegay iyada oo la raacayo sharciga aaminka. Intaas waxaa sii dheer, waxay bixin kartaa taxane ah faa'iidooyin iyo qaybinta qof ama koox dad ah. Aaminaada ayaa dadkaas u tilmaamaysa inay yihiin ka-faa'iideystayaal. Waa kan farqiga. Ka soo qaad in garsoore hal maxkamad xukumo uu dalbado in lacagaha la wareejiyo. Nasiib wanaag adiga, wakiilka (xafiiskayaga sharciga dibada) ee xukunka shisheeyaha kuma qasbana inuu adeeco.
Wakiilka iyo / ama shirkadda aaminka ah ee loo xilsaaray maaraynta kalsoonida. Waxaa ku waajib ah waajibaad aamin ah si ay u fuliyaan heshiiska. Saxiixida dukumiintiga waxay ogolaanayaan qawaaniinta iyo shuruudaha lagu dejiyay sharciga aaminka. Aaminaadu waa ka duwan tahay shirkad ama aasaas. Aamminaadda noocan ah waa heshiis qoraal ah. Waxay cadeyneysaa in wakiilku yahay si ay u bixiyaan ka-faa'iideystayaasha iyo in ay ka ilaaliyaan hantida ugaarsadayaasha.
Go'aansashada in la sameeyo Aruurinta Badbaadinta Hantida
Marka hore, deganaha wuxuu gaadhay go'aanka ah inuu sameeyo aaminaadda. Kadib, degenahuhu waa inuu doortaa nooca aaminka ee uu doonayo inuu sameeyo. Tan waxaa ku jira muddadiisa, oo noqon karta mid waarta. Dejiyaha wuxuu sidoo kale (anaga kaalmadeena) gaari doonaa go'aano muhiim ah qeexida faahfaahinta. Faahfaahintaas waxaa ka mid ah go'aaminta in aaminaada la noqon karo iyo in kale. Waxay ka mid yihiin in aaminaada ay noqonayso mid ku-meel-gaar ah iyo in kale. Waxaa intaa dheer, waxay qeexi doontaa xuquuqaha, waajibaadka, waajibaadka, iyo waxyaabaha laga filayo wakiilka.
Hadda aan wax ka qabanno fikirka aamminka ah ee la burin karo ama lagama noqon karo. In kasta oo magacyadoodu muujinayaan, aaminaad dib loogala noqon karo waqti kasta waa laga noqon karaa iyadoo la raacayo shuruudaha tan uu dejiyay degenahu. Haddii kale, waxay yeelan karaan cimri horay loo sii go'aansaday (ama waxay socon karaan muddo aan xad lahayn) oo aan lahayn qodobo dib uga laabashada. Taasi waa, waxaa laga yaabaa ama ma soo gabagabeyn karto iyadoo kuxiran shuruudaha abuurkiisa sida ku qeexan camalka aaminka.
Marka la barbardhigo, aaminaad kumeel gaar ah ayaa ku dhici karta labada qaybood, waxaana lagu qeexaa aaminaad leh dabacsanaan aad u badan oo la xiriirta sida wakiilka u maareynayo u qeybinta ka-faa'iideystayaasha, iyo xitaa mararka qaarkood, wakiilka leh xuquuqda magacaabista ama ku dar ka-faa'iideystayaasha. Tani waxay ka tanaasulay awood badan xagga kalsooni dibadeed wakiilka, hase yeeshe, wuxuuna muujiyaa muhiimadda taxaddarka taxaddar leh wakiil ammaaneed ama shirkad aammin leh tixraacyo wanaagsan, sumcad mudan, iyo waaya aragnimada loo baahan yahay si guul iyo daacadnimo leh loo fuliyo loona sharfo shuruudaha kalsoonida .
Faa'iidooyinka Hantidhowrka Dibadda
Meeleynta hantida iyo hantida hantida ee aamminsanaanta waa halka ay qaybta libaaxyada ee qarsoodiga iyo ilaalinta ka timaadda faa'idooyinka masruufka ee aamminaadda badda. In kasta oo cinwaanka sharciga ah uu u gudbiyo wakiilka, kaas oo ah inuu fuliyo waajibaadyada lagu kalsoon yahay. Ujeedada kalsoonidu waa inay bixiso ka-faa'iideystayaasha, oo laga yaabo inay degaanku noqon karaan, badanaa waa, kaqeybgalaha taxan. Ka-faa'iideystayaashaas, waxay leeyihiin xuquuq aad u xoog badan oo leh ixtiraamka danaha kalsoonida iyo badi awooda xukunta Ujeedadu waa in la bixiyo faa'iidooyinka, sida lagu qeexay kalsoonidii loo qabay, ee ka-faa'iideystayaashaas iyo si fiican ugu talagalaan jihadooda marka su'aalaha sida maareynta kalsoonida ay soo baxaan.
Sababtoo ah arimahaan dibadda ah waxaa inta badan laga helaa canshuurta canshuurta ama awooda hantida hantida a sumcadda ilaalinta hantida iyo sir haynta fiican, kalsooni dibadeed ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya sifooyinkaas. Hanti-dhowrka lagu maareeyo sanduuqyada dhul-galka ayaa ah kuwa ugu badan xor ka ah mararka qaarkood ciriiriga sharciga ah ku dabaqi karo waddanka hooyga ama degaankiisa. Haddii kalsoonida la abuuro si loogu habeeyo faa'iidada qofka abuuray kalsoonida iyo / ama isqabta, carruurta ama dhaxalka kale ee degaanka, tusaale ahaan, kalsoonida badda waxaa laga yaabaa inay ka hesho meel laga soo baaro dhaxal aad u daran. Dadka Mareykanka, aaminida hantida xeebaha guud ahaan waa canshuur dhexdhexaad ah. Tani, ma kordhinayso mana dhimayso cashuurahaaga.
Dheeraad ah, oo ku saleysan abuuritaankooda ilaalinta hantida hanti-dhawrka ah, goobaha dalxiiska ee bannaan sir qarsoodi la'aanta, kor u kaca ilaalinta khatarta dacwadaha madaniga iyo masuuliyadda, iyo xitaa wixii ka yimaadaa sida furriinka ama khilaafka ganacsiga. Waxa kale oo ay u isticmaalaan dad badan oo ilaaliya hantida haddii ay dhacdo in aqal kumbuyuutar ah ama dhaqaale xumo Aad u adag tahay, ka badbaadin xaaladaha eedeeymaha ah dembi aad u daran, oo ah hay'ad dibedda ah si ay u xakamayso xajinta qarsoodiga ee ku tiirsan kalsooni dibadeed inta badan xukumada.
Xaggee Laga dhajiyaa Trust
Kalsoonida dibeddu inta badan waxaa lagu sameeyaa cashuuro hoose ama hanti badbaado oo leh sumcad la hubo oo ku saabsan maaraynta guusha iyo fulinta lacagaha kalsoonida iyo aaminaada. Si kastaba ha noqotee, gabi ahaanba lagama maarmaan uma aha goobta ku habboon inay noqoto goob cashuur ama yeelato xeerar jilicsan - qaar badan oo ka mid ah awoodaha kalsoonida samaynta kalsoonida ee wadamadu waxay si fudud u bixiyaan caan, shirkado aamin ah oo khibrad leh oo ay weheliso sirta heer sarre ah iyo gaashaandhig weyn oo hanti.
Hal mid ah oo loo yaqaan 'denominator' waa in xukumadahani ku saleysan yihiin xeerarka kalsoonidooda iyo qawaaniintooda sharciga guud ee Ingiriisiga - tani waa sababta oo ah fikirka ugu weyn ee samaynta aaminaad waa fikir Ingiriis ah oo qadiim ah oo ka soo bilaabatay waqtigii xasuuqii. Xeerarka kale ee Yurub ee bixiya maaraynta guusha aaminka ah, sida Luxembourg, Malta, Switzerland, iwm, waxay la jaanqaadeen qaynuunnadooda iyo qawaaniintooda si ay ula jaan qaadaan moodellada maamulka kalsoonida saxda ah ee ay dejiyeen kuwa ku saleysan sharciga Ingiriiska ee caadiga ah. Xudduudaha ka soo baxa inta ka hartay marka laga hadlayo ilaalinta hantida ayaa ah Cook Islands, Nevis kalsooni iyo mid ka mid ah magaalada Belize, sidaasi darteed.
Sameynta kalsooni dibadeed waxay u baahan tahay qiimeyn dhab ah oo ku saabsan himilooyinka iyo ujeedada laga helayo deggaan suurogal ah, waxaanay ka faa'iideysan doontaa qaar ka mid ah ilaha dhismaha iyo dayactirka. Sidaa daraadeed, cilmi-baaris dhab ah, iyo cilmi baaris Talo iyo caawimaad ka socota wakiillada khibrad leh iyo kuwa aqoonta leh waa waajib.
Sameynta kalsooni dibadeed waxay bixisaa difaac weyn oo hanti-dhawr ah oo ka timaadda baaritaan aan caddayn, dacwad, iyo mashaakil bulsho. Waa in la ogaadaa in kasta oo kharashka dhismaha iyo dayactirka laga yaabo in la tixgeliyo, abuuritaanka a Ammaanka dibadda wuxuu siin doonaa nabadgelyo maskaxeed oo loogu talagalay dadka raadinaya ilaalinta hantidooda qiimaha leh ama u siinaya carruurtooda muddada dheer.